Rita, Writing for My Sake!: အပေါင်း၊ အနုတ် နဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း
Posted by Rita at 5/22/2010 11:15:00 PM
Post တစ်ခုလုံးမှာ အရင်ဆုံး သတိထားမိတာတော့ မကျေနပ်စိတ်ပဲ - လူတစ်ယောက်က ယုံကြည်ချက် တစ်ခုကို ကိုင်စွဲလိုက်ပြီဆိုရင် ဘယ်တော့မှ တော်ယုံနဲ့ လက်မလွှတ်ချင်ကြဘူး - အဲ့ကြားထဲက ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်က + လက္ခဏာ ပြတယ်ဆိုတာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သေချာနေရင် ပိုပြီး ဆိုးသွားတယ်။
အရာရာတိုင်းကို ဘာဖြစ်ဖြစ် ရင်ဆိုင်မယ်ဆိုတဲ့ ရဲတင်းစိတ် ဝင်လာတယ်။
ယုံကြည်ချက်ကို ဖော်ထုတ်ရင်ဆိုင်တာ - သက်ရောက်လာတဲ့ Action တိုင်းကို တုံ့ပြန်တာ ကောင်းတာတော့ ကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့် ယုံကြည်ချက်တစ်ခုကို ရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာ သွေးအေးဖို့လိုတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မှာ ရပ်နေသူက ကိုယ့်ဘက်လူ ဖြစ်မလာနိုင်ရင်တောင် - နောက်တစ်ကြိမ် ကိုယ့်ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်မှာ ရပ်နေသူဆက်ဖြစ်မနေဖို့လိုတယ်။ ဒါမှ ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်ကို တင်ပြမှုက သူ့အတွက်ရော ကိုယ့်အတွက်ရော အကျိုးရှိနိုင်မှာပေါ့။ ယုံကြည်ချက် ( ၂ ) ခု ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ အခါ မကျေနပ်စိတ် များတဲ့သူရဲ့ ယုံကြည်ချက်က အနှုတ်လက္ခဏာ ဖြစ်သွားတတ်တယ်။ မှန်ကန်တဲ့ ယုံကြည်ချက် ကို ဆုပ်ကိုင်ထားသူတွေ အောင်ပွဲခံစေချင်လို့ပါ။
ယောက်ပြားတွေကိုတော့ ကိုယ့်ဘက်မှာ မရပ်တည်စေချင်တာ အမှန်ပဲ ကိုZT.
ကိုယ့်ဘက်မှာ မပြောနဲ့ သူများဘက်မှာတောင် မရှိစေချင်လို့ ညလဆကို လှမ်းသတိပေးရတာသာ ကြည့်တော့။ ယောက်ပြားတစ်ယောက်က ချဉ်းကပ်ပြီး ကြောင်တာ သူ ခံရမစိုးလို့။
မရီတာရေ။ ဒါမျိုးတွေ လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
လူအမျိုးမျိုး စိတ် အထွေထွေကိုးဗျ။ တစ်ခါတစ် လေကြတော့ မှန်တာ မှားတာ အပထား ဥပက္ခာ ပြုလိုက် တာ စိတ်ချမ်းသာပါတယ်။
ခုတော့ နိုင်ငံရပ်ခြားထွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ ယေဘုယျအားဖြင့် ခြုံငုံယှဉ်ထိုးကြည့်နိုင်တဲ့ နှစ်ရပ်(အကျင့်ကြံပြုမူပုံ၊ စဉ်းစားတွေးခေါ်နည်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အသိုင်းဝန်းရဲ့ဆက်ဆံမှုပုံသဏာန်)တွေကို ယှဉ်ကြည့်လို့ရသွားတယ်။
အရင်ကတော့ ကိုယ့်လူမျိုးမှကိုယ့်လူမျိုး ဆတ်ဆတ်ထိမခံတတ်ပေမဲ့ သွေးအေးလာတဲ့အခါမတော့ အများကြီး ယှဉ်သုံးသပ် ဆင်ခြင်လာနိုင်တယ်။
ဒါကြောင့် အနားပတ်လည်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ဘေးချော်နေတာတွေအများကြီးကို ဘေးချော်နေတယ်လို့ခံစားတတ်လာတယ်။
ညီမ..အမတို့ညီမတို့ဆိုတာ ဒေါကန်စရာရှိရင် ပေါက်ကွဲပစ်လိုက် ပီးရင် ခေါင်းထဲတည့်မထားတတ်သလို ပက်ပက်သက်သက်ကိုမလုပ်တတ်တာ အကျင့်ပဲဆိုတော့ ..
လုပ်ချင်ရာတာလုပ်ပလိုက် စိတ်ချမ်းသာတယ်။ မြှောက်ပေးသွားတာ..။
တခါတလေမှာ လူတချို့ကို ခွင့်လွှတ်စရာတော့ မလိုသလို နောက်ထပ်ပက်သက်စရာလဲမလိုဘူးဆိုတာ မမေ့နဲ့ညီမ။
မြတ်နိုး ပြောတာနားထောင်.. ဟား..
ဟို ဘိန်းဘုရင် တွေ စီးပွားရေး လုပ်တာ ကို အင်တာဗျူးပြီး စွန့်းဦးတီထွင် ဆောင်းပါးတွေ ရေးခဲ့ တဲ့ ဆောင်းပါးရှင် နဲ့ ညီမ ပြောတဲ့ မြန်မာ့ဓန မှာလား "စွန့်ဦးတီထွင်" ဆောင်းပါးတွေ ရေးခဲ့တဲ့ ဦးရဲမြင့် (ရဲမြင့် - စွန့်ဦးတီထွင်) နဲ့ အတူတူ လားတော့ မသိဘူး..
ဟုတ်ရင်လဲ ဟုတ်မယ်အစ်မ။ ဘာလို့ဆို သူအဲဒါတွေ ရေးတုန်းက ခေါင်းစဉ်တွေသာ ရင်းနှီးတာ ဖတ်မကြည့်ခဲ့ဘူး။ ဖတ်ကြည့်လဲ အဲဒီအရွယ်က အဲဒါတွေ နားလည်မှာ မဟုတ်ဘူး။ နားလည်လဲ ဘိန်းဘုရင်မှန်း သိမှာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီတုန်းက ဓန မြန်မာ့ဓနမှာ ဖတ်တာဆိုလို့ အီကြာကွေးပဲ ရှိတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျောင်းပြီးတော့ လော်စစ်ဟန်ရဲ့ အေးရှားဝေါလ်မှာ ၄ လတိတိ ဝင်လုပ်ခဲ့သေးတယ်။ လုပ်ငန်းခွင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြိုက်ရင် ဆက်လုပ်ဖြစ်မှာ၊ ဒါပေမဲ့ ဝင်လုပ်ခဲ့တဲ့ ဌာနက ဆရာသမားတစ်ယောက်ပြောဖူးတဲ့ လူငယ်တွေအတွက် ခြေသုတ်ဖုံနှင့်တူသောဌာန ဆိုတာမျိုးဖြစ်လို့ ထွက်လာခဲ့တာ။
ဒါပေမဲ့ သူ့ကိုယ်သူ မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ တန်းညှိပြီး၊ cbox တွေ comment တွေ ဖွင့်တာကို ဂုဏ်လုပ်ပြောတတ်ပေမယ့်၊ ပြောထားတဲ့ကိုယ့်စကားကိုယ် တာဝန်ယူကြဖို့ တသက်လုံး ကျွန်ခံကြေး၊ ကိုယ့်ဘာသာ သတ်သေကြေး၊ လူလည်ကောင်နားရင်းအုပ်ခံကြေးလို့ စိန်ခေါ်တော့ ပါးစပ်ကိုပိတ် အသံကို တိတ်သွားတဲ့ ယောက်ပြားကောင်ကို ပန်ဆယ်ဟီးလ် စီးထားတဲ့ ခြေထောက်နဲ့ ဖိနပ်မချွတ်ဘဲ ဖနောင့်နဲ့ပေါက်လိုက်ရရင် သိပ်အရသာရှိမှာပဲလို့တော့ တွေးနေမိတယ်။
ယောက်ပြားပီပီ သူ့စကားသူ တာဝန်မယူနိုင်တာကို ကွယ်ပြီး ပြန်တော့ချေချင်ချေလိမ့်မယ်။ ယောက်ပြားတို့က အဲလို ရင့်ရင့်သီးသီးမိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း ပြောတတ်တဲ့ မိန်းမမျိုးကို အဖက်မလုပ်ချင်လို့ ဘာမှ ပြန်မပြောတာ၊ အဲဒီမိန်းမနေရာမှာ တိုတိုညင်းဆက် လို လူ ဆိုရင်တော့ ပြန်ပြောမှာပေါ့လို့ ဆိုပြီး...
(ဟားဟားဟား ရိုက်ရင်းနဲ့ ရီချင်တယ် အစ်မရယ်။ အဲဒီယောက်ပြားက အဲဒီ နိုင်ငံရေးလိုလို ဘာလိုလို ဒီလိုလို ဟိုလိုလို မိုမိုတွေရေးတဲ့ဆိုဒ်ကိုတော့ အပြတ် ထောက်ခံတယ်။ ဘယ်လိုဟာမျိုးကို ဘယ်လိုဟာမျိုးက ထောက်ခံနေကြလဲတော့မသိဘူး။ ယောက်ပြားတွေထောက်ခံတဲ့ ပါတီတွေ ဘာတွေများ ထောင်ကြဦးမလားပဲ)
မှတ်ချက်။ ။ မိန်းမရှာများ၊ gay များ၏ စိတ်ဓါတ်အဆင့်အတန်းအား စော်ကားရန် စိတ်ကူးမရှိ။
ယောက်ပြားများ၏ စိတ်ဓါတ်အဆင့်အတန်းကိုသာ ဖော်ထုတ်ချင်တာဖြစ်သည်။
ယောက်ပြား နဲ့ မိန်းမရှာ အဆင့်အတန်းအားဖြင့်မတူ။ ယောက်ပြားက မိန်းမရှာနှင့် မနှိုင်းယှဉ်သာအောင် နိမ့်ကျစုတ်ပြတ်သည်။